A ga -egosi Vivo Apex n'ihu ọha na June 12 | Androidsis
N'oge 2018 World Congress Congress Anyị hụrụ ọtụtụ ngwaọrụ ndị na-adọrọ mmasị, mana enweghị mgbagha otu n'ime ndị kacha pụta ìhè bụ Vivo Apex, ngwaọrụ nwere ihuenyo zuru oke na-enweghị oke (yana ọkwa), igwefoto zoro ezo zoro ezo na ihe mmetụta batara na ihuenyo ahụ.
Ka ọtụtụ izu gachara n’amaghị ihe ọ bụla, ọnwa ole na ole gara aga a mara ọkwa na vivo Apex ga - ahụ ọkụ na nkeji nke atọ nke 2018. Ugbu a, anyị mechara nwee ụbọchị ọrụ: Ọnwa Isii 12, 2018.
Na mgbakwunye na ụbọchị ntọhapụ, Vivo bipụtara vidio ọhụrụ nke lekwasịrị anya na iko ụwa na-abịa na Russia, na nkenke anyị nwere nkenke na ngwaọrụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Atụmatụ Vivo Apex
Ọbụna na ozi ndị a niile, anyị amabeghị ọtụtụ ihe banyere Vivo Apex, ọbụnadị ezigbo aha ya. Apex bụ aha njirimara nke a hụrụ na mbụ ya, mana ọ ga-abụ aha mbido ya.
Anyị amaghịkwa ihe ọ bụla gbasara ụdịdị ma ọ bụ mba ebe ngwaọrụ ahụ ga-adị. O yikarịrị ka ekwentị ahụ dị na China na-ebu otu njirimara dịka mbido mbụ.
Vivo Apex prototype nwere a Ihuenyo 5.99-inch na OLED teknụzụ, ihe nhazi Snapdragon 845 na njikọ USB-C na-esote ntinye 3.5mm ọdịyo. A na-ewu ihe mmetụta mkpịsị aka n'ime ihuenyo na igwefoto n'ihu nwere ike iweghachi, nke nwere ike ịbụ nsogbu nye ndị na-ewere onwe ha mgbe mgbe.
N'ezie, ugbu a enweghị ozi gbasara ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ, anyị nwere olile anya na na June 12 a ga-egosi data teknụzụ niile yana ọnụ ahịa na nnweta, maka oge anyị ga-echere tupu ọhụụ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A ga-enyefe Vivo Apex na June 12